दलाल र ठेकेदारसँग बसेर ह्विस्की तान्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्: अध्यक्ष माेक्तान - Nepal's Digital News Paper
दलाल र ठेकेदारसँग बसेर ह्विस्की तान्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्: अध्यक्ष माेक्तान
रामेछापका मैनकुमार मोक्तान ‘मदन’ स्कुले जीवनमै राजनीतिमा लागे । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै युद्धकालमा तत्कालीन माओवादीको रामेछाप जिल्ला सेक्रेटरी भए । त्यही बेला दोरम्बा हत्याकाण्ड भयो । उनी भाग्यले बाँचे ! त्यो २०६० साउन ३२ गतेको कुरा थियो । जति बेला माओवादी र राज्यबीच शान्तिवार्ता चलिरहेको थियो । त्यही बेला दोरम्बामा पार्टीको बैठक बसेको थियो । सेनाले बैठक बसेकै घरमा घेरा हाली २१ जनाको ज्यान लियो । तब दाङको हापुरेमा चलिरहेको शान्तिवार्ता भंग भयो । र, मदनलाई पार्टीले जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमिसार बनायो । उनी पुनः २०६४ पछि रामेछाप सेक्रेटरी बने । माओवादी र एमाले एकतापछि बनेको नेकपामा उनले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी पूर्वमाओवादीमा पनि जिल्ला अध्यक्षकै भूमिकामा थिए । लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा एसकाठमाडौंले उनीसँग दोरम्बा घटनाको स्मरण र नेकपाको नयाँ जिम्मेवारीबारे गरेको कुराकानी उनकै शैलीमा ।
सेनाले त्यस्तो गर्ला भन्ने लागेकै थिएन
हामी बसेको घरलाई तीनतिरबाट सेनाले घेरा हालेको थियो । घर एल आकारको थियो । म भित्र थिएँ । एकातर्फ निकास थियो । दुई तलामाथि बुइँगलको झ्यालबाट हाम फालेर भाग्न सफल भएँ । के गर्ने भनेर कसैसँग सल्लाह गर्ने समय थिएन । हरि दाहालचाहिँ तल छिँडीबाट सेनालाई धकेलेर भाग्नुभएछ । यसरी हामी दुई भाइ बाँच्न सफल भयौं । हरिजीकी जीवनसाथी ललितासहित २१ जनालाई माथि डाँडाँकटेरीमा लगेर तत्कालीन शाही सेनाले गोली ठोकेर मार्यो । त्यस बेला म भर्खरै रामेछाप जिल्ला सेक्रेटरी भएको थिएँ । हरि दाहाल इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो ।
वैशाख ९ ऐतिहासिक दिन
नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंगिएको वैशाख ९ कम्युनिस्टहरूका लागि हर्ष र गौरवको दिन हो । बीचमा पार्टी एकता वास्तविकतामा नहुने पो हो कि भन्ने आशंका कार्यकर्ता र जनतामा परेको थियो । तर, ७७ वटै जिल्लामा नेतृत्व घोषणा भएपश्चात् त्यसको अन्त्य भएको छ । सबैमा उत्साह र ऊर्जा पलाएको छ । हामीले वैशाख ९ लाई ऐतिहासिक दिनका रूपमा लिनुपर्छ ।
विधि र प्रक्रियाका आधारमा एकता भएको छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरिएको भए त्यसले न्याय गर्न सक्दैनथ्यो । त्यसकारण यो एकताले निष्ठावान र क्रान्तिकारी नेता÷कार्यकर्तामाथि न्याय गरेको छ । नेतृत्वले विधिका आधारमा निर्णय लिएकै कारण लामो समय गिजोलिएर बसेको पार्टी निष्कर्षमा पुगेको हो ।
जनताका थुप्रै आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नेकपासँग छ । यस्तो परिस्थितिमा पार्टीको जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्व चुनौतीपूर्ण छ । त्यसकारण मलाई यो जिम्मेवारीले गम्भीर बनाएको छ । नेकपाले एकातर्फ जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने दायित्व छ भने अर्कातर्फ समाजवादी आन्दोलन अघि बढाउनुपर्नेछ । यी दुई कुरामा केन्द्रित भएर म काम गर्छु ।
दुःखकष्ट भोगेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । राजनीतिक उत्तारचढावको सामना गरेका छौं । युद्धको समयमा थुप्रै पटक मृत्युको मुखबाट बाँच्यौं । पहिला पनि मैले कहिले जिल्ला सेक्रेटरी त कहिले संयोजकको भूमिकामा रहेर काम गरिसकेको छु । ती सबै अनुभव उपयोग गरी सबैसँग सहकार्य गरेर रामेछापको पार्टीलाई अझ सशक्त र जुझारु बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन ।
नेपालमा कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसैले म कम्युनिस्ट पार्टीमा छु । म वास्तविक कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छु । म सानै उमेरदेखि जानी–नजानी राजनीतिमा लागें । बिस्तारै राजनीति बुझ्दै आएँ ।
सरकार पार्टीको कमान्डमा
कम्युनिस्टहरूको मुख्य कार्यभार अहिले समाजवादी व्यवस्था ल्याउनु हो । त्यसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ । मुखले भनेर समाजवाद आउँदैन । व्यावहारिक रूपमा समाजवाद ल्याउन पहिला पार्टीलाई यथार्थमा कम्युनिस्ट बनाउनुपर्यो । रामेछापको नेकपालाई कसरी वास्तविक कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने भनेर म सोचिरहेको छु । त्यसका लागि पार्टीभित्र सिस्टम स्थापना कसरी गर्ने ? पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? जसको शक्ति त्यसको भक्ति गरेर कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन । एउटा पूरै ढाडिने र अर्को भोको हुने व्यवस्था कम्युनिस्ट हुन सक्दैन । कम्युनिस्ट व्यवस्थामा सबैमा समानता हुन्छ । मेरो ध्यान त्यो कुरामा केन्द्रित हुन्छ ।
जहाँसम्म तपाईंले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभएको छ । यो बीचमा खाली समयमा को कसको कमान्डमा रहने भन्ने नै भएन । जनप्रतिनिधि साथीहरू आफ्नै तरिकाले चल्ने र पार्टीका साथीहरू पनि आफ्नै तरिकाले । जसका कारण कोही कसैको निगरानीमा भएनन् । अब त्यसो हुन दिइन्न । देशभरि पार्टीले आफ्नो कमान्ड लिन्छ । सरकार पार्टीमातहत चल्नुपर्छ । निर्वाचन पार्टीको नाममा आएको भोटले जित्ने अनि अहिलेचाहिँ पार्टीभन्दा ठूलो बन्न कहाँ पाइन्छ ।
हुन त अहिले पार्टी र सरकार आफ्नै तरिकाले चलिरहेका छन् । तर, त्यो गलत हो । हामीले कांग्रेसभन्दा यो कारणले कम्युनिस्ट फरक हो भनेर व्यवहारमै देखाउन सक्नुपर्छ, जनताले विश्वास गर्ने तहमा । त्यसका लागि कम्युनिस्टले नीति बनाउनुपर्छ । सरकार पार्टीको मातहतमा चल्ने हो, पार्टी सरकारको मातहत होइन । यो उल्टो हुन्छ । ‘पार्टी सार्टी गोली मारो’ भन्ने हो भने सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । त्यसकारण केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म पार्टीको कमान्डमा चल्नुपर्छ । बल्ल सरकार भ्रष्ट हुनबाट रोकिन्छ ।
जनप्रतिनिधि भनेको पार्टीको पोलिसी सरकारमा बसेर कार्यान्वयन गर्ने हो बडी हो । तर, पार्टीको जिम्मेवारी केही होइन र सरकारको जिम्मेवारीचाहिँ के के न होजस्तो भएको छ । यसरी समाजवाद आउँदैन । पार्टीले मलाई रामेछाप जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । अध्यक्ष म या अर्को जो भए पनि पोलिसी मुख्य कुरा हो ।
दलालसँग मिल्नेहरू कम्युनिस्ट होइनन्
पार्टीभित्र राम्रो र नराम्रो दुवै कुरा हुन्छ । रामेछाप पार्टीमा पनि त्यो छ । अलि बढी नराम्रो हावी भएको हो कि भन्ने सबैतिर परेको छ । अब त्यसो हुन दिइन्न । रामेछापको नेकपालाई वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी बनाइन्छ । दलाल र ठेकेदारसँग बसेर ह्विस्की तान्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । ठेक्कापट्टा दलाली गैरकम्युनिस्टले गर्ने काम हो । यस्ता मानिसहरूको भीड बटुलेर समाजवाद कहाँबाट आउँछ ? त्यसलाई खारेज गरेर पार्टीमा त्याग गरेको, समाजवादी राजनीतिक प्रवृत्ति भएका साथीहरूलाई पार्टीमा स्थान दिनुपर्छ । म यसका निम्ति अन्तिमसम्म लड्नेछु ।
रामेछापको हकमा कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्टलाई फरक बनाएरै छाड्छौं । पहिलो कुरा, मैले पार्टीलाई स्वाभिमानी बनाउछु । कार्यकर्ता पनि स्वाभिमानी बन्नुपर्छ । सबै कुरा संस्थागत गरेर जानुपर्छ । अहिले अलिक व्यक्तिवाद हावी भएकै छ ।
प्रस्तुतिः राजकुमार श्रेष्ठ